March 23, 2020 - Ilo Wareed -
Idiris Elba oo laga helay cududrka Coronavirus, iyo xaaskiisa soomaalida oo wel-welsan
In a video shared to Twitter, Elba said he learned on Friday that he’d been exposed to someone who’d tested positive for the virus. KA DAAWO HALKAAN
Cirro Iyo Beesha Arab By Mukhtar Cilmi
asalaamu calaykum waraxmatulaahi wabarakaato.Caawa waxaan raba in aan iftiimiyo arin aan ilaa haatan caqliga saliimka ahe gali karin, waa kuraasta titalada xisbiga waddani 1. Gudoomiyaha 2. Gudoomiyaha ku meel gaadhka!! 3. Hogaamiyaha xisbiga !! Markan aan sharciga eego maba ahaa wax sharci ah in sadex title ay isku mid noqdan taasna waxay cadenaysa in xilka xil.cabdiqaadir jirde yahay mid aan jirin oo sharciga waafiqsanayn.Cirro waa nin danisi ah oo beenta ku dheer waxaana taas ku cadenaysa marku ku guuldaraystay doorashadii in u wareejin laha xisbiga siyaasi cabdilqaadir jirde oo kasoo jeeda beesha arab ee mudan. Shirweynihi burco ay waddani ku dhigtayn kumay soo darin ajandooyinkiisa wareejinta xisbiga wata keentay in u cabdil qaadir jirde aanu iman ba shirka oo halkaas cirro kaga baxay balan qaadkiisi beesha codka badan ka helay. Beenta iyo munaafaqdo jar bay kaa tuurta bal eeg kulmiye gudoomiye cosob bay dooran doonan halku weli cirro ku dhagsan…
Soomaaliya Oo Go’aan Fulaynimo Ka Qaadatay Khilaafka Dowladaha Itoobiya Iyo Masar
March 23, 2020 Muqdisho (Cadceed) –Dowladda Soomaaliya ayaa ka daba-tagtay oo diiday qaraarkii ay horay u taageertay ee Jaamacadda Carabta, kaasoo loogu cambaareynayay dowladda Itoobiya qorshaheeda ku saabsan biyo-xidheenka Webiga Nile kadib waraaq ay u dirtay Jaamacadda Carabta. Waraaqda ay Dowladda Soomaaliya u dirtay Jaamacadda Carabta ayaa lagu sheegay inay ka gaabsatay qaraarkaas ayna dhexdhexaad ka tahay, isla markaasna ay soo jeedineyso in khilaafka u dhaxeeyo dowladaha Itoobiya iyo Masar lagu xaliyo qaab wadahadal ah. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa markii ugu horeesay ka hadley khilaafka ka dhashay biyo xireenka ay dowlada Itoobiya dhiseyso ee khilaafka ka dhax abuuray Dowladaha Itoobiya iyo Masar. Waxaa uu sheegay wasiir Cawad in Soomaaliya ay dhex dhexaad ka tahay khilaafka u dhaxeeya labada dowladood ee Masar iyo itoobiya, waxa uuna meesha ka saaray in Soomaaliya ay labada dhinac mid la safan tahay. “Runtii mowqifka Soomaaliya ee khilaafka dowladaha Itoobiya…
Itoobiya Oo Shaacisay Inay Xidhay Dhamaan Xuduudaha Ay La Wadaagto Dalalka La Deriska Ah
March 23, 2020 Addis Ababa (Cadceed) –Raysal Wasaaraha Dowladda Federaalka ee Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa ku dhawaaqay in la xiray xuduudaha Itoobiya la wadaagto dalalka deriska la’ah gaar ahaan kuwa dadka kasoo gala. Sababta loo xidhayo xuduudaha Itoobiya la wadaagto dalalka dariska ayuu sheegay inay tahay in la xakameeyo faafida Cudurka Coronavirus, waxaana Itoobiya ay Cudurkaas u qoondeysay lacag dhan 5 Bilyan oo Birr. Dhinaca kale dadka Itoobiya uga imaanaya dalalka kale ayaa waxaa lagu wargeliyay in la karantiili doono muddo 15-maalmood ah, isla markaana ay joogi doonaan skylight hotel iyo Ghiyon hotel. Dalka Itoobiya ayaa la helay dhowr ah oo uu ku dhacay Cudurka Coronavirus, kuwaasi oo lagu karantiilayo goob gooni ah, waxaana Itoobiya shalay ay deeq Caafimaad ka heshay dowlaha Shiinaha, waxaana kamid ah qalabka looga hortego Coronavirus. Cadceednews Hargeysa
Somaliland Oo Ka Hadashay Xaalada Dad Looga Shakiyay Caabuqa Coronavirus Oo Maanta Hargeysa Lagu Karantiilay
March 23, 2020 Hargeysa (Cadceed) –Xukuumada Somaliland ayaa ka hadashay 16 ruux oo Maanta laga qabtay gudaha Garoonka diyaaradaha Hargeysa, kuwaasi oo yimid dalka dibadiisa, isla markaana looga shakiyay inay qabaan Cudurka Coronavirus. Dr Maxamed Cabdi Xergeeye oo ah Agaasimaha guud ee Wasaarada Caafimaadka Somaliland ayaa sheegay in 16 oo Soomaali ah oo looga shakiyay Corona lagu qabtay Hargeysa lana karantiilay. Waxaa uu sheegay Agaasime Xergeeye in baaritaankii ugu horreeyay ee COVID-19 lagu sameeyay, isla markaana aan laga heli wax Cudur ah, xili ay ka yimideen dalal uu ku saameeyay Coronavirus ayna xaaladooda wanaagsan tahay. Isaga oo sii hadlaayay Agaasimaha guud ee Wasaarada Caafimaadka Somaliland ayaa waxaa uu tilmaamay in dadkaas ay u hadhsan yihiin baadhitaano kale oo lagu sameeyn doono, isagoona xusay in hadii laga waayo wax cudur ah la fasixi doono. Ugu dambeyn Agaasimaha ayaa waxaa uu sheegay in Somaliland ay wado dadaalo badan oo looga hortego faafida…
DAAWO:-Wasaarada Waxbarashada Somaliland Oo Qaab Cusub Wax Ugu Dhigaysa Ardayda Bisha Fasaxa Lagu Jiro
March 23, 2020 Hargeysa (Cadceed) – DAAWO:-Wasaarada Waxbarashada Somaliland Oo Qaab Cusub Wax Ugu Dhigaysa Ardayda Bisha Fasaxa Lagu Jiro Cadceednews Hargeysa
DAAWO:-Mudanayaasha Golaha Wakiilada Somaliland Oo Loogu Yeedhay Fadhi Aan Caadi Ahayn.
March 23, 2020 Hargeysa (Cadceed) – DAAWO:- Mudanayaasha Golaha Wakiilada Somaliland Oo Loogu Yeedhay Fadhi Aan Caadi Ahayn. Cadceednews Hargeysa
Dowladda Ethiopia ayaa dalalka Jabuuti iyo Soomaaliya ka dalbatay inay u sheegaan mowqifkooda ku aaddan arrintan.
More than one billion people have been asked to stay home in over 50 countries and territories around the world as governments battle the coronavirus pandemic sweeping the globe, according to an AFP tally
DAAWO:-Agaasimaha Guud Ee Wasaarada Caafimadka Somaliland Ayaa Fariin Uu Diray Shacabka Somaliland..
March 23, 2020 Hargaysa (Cadceed) – Agaasimaha Guud Ee Wasaarada Caafimadka Somaliland Ayaa Fariin Uu Diray Shacabka Somaliland..
DAAWO:-Magaalada Borama Ayaa Manta Laga Xusay Malinta Biyaha Aduunka..
March 23, 2020 Boorama (Cadceed) – Magaalada Borama Ayaa Manta Laga Xusay Malinta Biyaha Aduunka
DAAWO:-Madaxwaynaha Jabuuti Oo Xaqiijiyey Labadii Qof Ee Laga Helay Corona Virus..
March 23, 2020 Hargeysa (Cadceed) –Madaxwaynaha Jabuuti Oo Xaqiijiyey Labadii Qof Ee Laga Helay Corona Virus..
DAAWO:-Wasaarada Beeraha Somaliland Ayaa Kooxo Uu Kala Dirtay Gobolada Somaliland..
March 23, 2020 Hargeysa (Cadceed) –Wasaarada Beeraha Somaliland Ayaa Kooxo Uu Kala Dirtay Gobolada Somaliland..
DAAWO:-Laba Muwaadin Oo U Dhashay Wadanka Jabuuti Ayaa Laga Helay Cudurka Corona Virus..
March 23, 2020 Jabuuti (Cadceed) – Laba Muwaadin Oo U Dhashay Wadanka Jabuuti Ayaa Laga Helay Cudurka Corona Virus
Ethiopia Airline Oo Maanta Mar Kale Soo Fadhiisatay Madaarka Hargeysa
March 23, 2020 Hargeysa (Cadceed) – Diyaarada Ethiopia Airline ayaa maanta 1:40 PM duulimaad rasmi ah ku timid madaarka Diyaaradaha ee Hargeysa isla markaana rakaab ka qaadi doonta madaarka. Dhawaan ayay aheyd Markii warqad ay soo saartay dawlada Somaliya ku sheegtay inay diyaaraha caalamiga ah kaga joojisay dhamaan garoomada Somalia, taas oo ku eekeed maalintii Shalay aheyd . Dawlada Somaliya ayaa iyadu sheegata inay maamusho hawda dalkii la isku odhan jiray Somaliya
DAAWO:-Soomaaliya Oo Ka Hadashay Mawqifkeeda Xiisadda U Dhaxaysa Dalalka Itoobiya Iyo Masar..
March 23, 2020 Hargeysa (Cadceed) – Soomaaliya Oo Ka Hadashay Mawqifkeeda Xiisadda U Dhaxaysa Dalalka Itoobiya Iyo Masar..
Xasan Cabdi Dhoorre waa seynisyahan baara cudurrada faafa, wuxuuna noo sharraxay sidii uu uga caafdimaaday Coronavirus.
Wax soo saarka bariiska Sh/Dhexe oo dib loo billaabay
Sidee la isku waafajin karaa xakameynta Coronavirus iyo ilaalinta xuquuqda dadka?
Dowladda Shiinaha ayaa u muuqata in ay ku guulaystay yaraynta fidintaanka Coronavirus, iyada oo adeegsatay teknaloojiyadda casriga iyo dabagalka dhaqdhaqaaqa dadka.
Kenya oo amartay in la xiro goobaha cibaadada
Dawladda Kenya ayaa amartay in la xiro goobaha cibaadada ee dadka badan ay iskugu yimaadaan, si loo yareeyo fiditaanka xanuunka Coronavirus. Goobahaas waxaa ku jira kaniisadaha iyo maaajiddada iyo meelaha kale ee dadku iskugu yimaadaan, sida lagu sheegay amarka kasoo baxay dowladda. Kenya ayaa diiwaangelisay 15 xaaladood oo ah cudurka Coronavirus, waxaana laga cabsi qabaa inay kordhaan dad uu ku dhacay xanuunkan. Weriyaha VOA Intisaar S
Puntland forces nab Shabaab, ISIS militants in Bosaso
GAROWE (HOL) – Puntland Security Forces Sunday night nabbed suspected members of the Al-Shabaab and Daesh terrorist groups and seized weapons.
The most successful British track athlete in modern Olympics history and a European & World record holder in multiple events, Mo Farah celebrates his 37th birthday. Born on this day in 1983, Mo Farah is the most decorated athlete in the history of British athleti
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in mawqif dhexdhexaad ah ay ka qaadatay muranka u dhexeeya Masar iyo Ethiopia ee ka dhashay biyo-xireenka ay Itoobiya ka sameyneyso webiga Nile.
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya inay dib u billaabatay wax soo saarka bariiska. Bariiska ayaa horey uga bixi jiray gobolka hase yeeshee waxa hakiyey colaadihii waddanka iyo caqabadaha dhinaca wax soo saarka. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo d
Pompeo oo dhex-dhexaadinaya Ashraf Ghani iyo Abdullah Abdullah
Xoghayaha Arimaha Dibada ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa booqasho aan la shaacin ku tagey Isniinta maanta ah magaalada Kabul, halkaasi oo la filayo inuu riixo wada hadalada nabadda ee Afghanistan iyo sidii xal loogu heli lahaa qalalaasaha siyaasadeed ka dib doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ee muranka dhalisay. Pompeo ayaa la kulmi doona Madaxweyne Ashraf Ghani iyo ninka la tartamay ee ay is hayaan Abdullah Abdullah. Ghani ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay ninka ku guuleystay doorashadii dalkaasi, halka Abdullah uu ka dhiidhiyay natiijada. Labada mas’uul ayaa kiiba qabsaday xafladda dhaarta ee madaxweyninimada. Booqashada Pompeo ayaa timid maalin kadib markii Mareykanka iyo Qatar ay gacan ka geysteen in saraakiisha Afghanistan iyo Taliban ay wadahadal toos ah ku yeeshaan dhanka alladaha muuqaalka ee internet-ka. Zalmay Khalilzad, ergayga nabada ee Mareykanka ee Afghanistan, ayaa sheegay
China oo maalinkii 5-aad oo xiriir ah aan laga helin kiisas Coronavirus ah
Diyaaradihii hakiyay duulimaadyada oo loo la’yahay meel la dhigo
Maadaama aysan jirin duulimaadyo, waxay isugu yimaadeen garoonada
Cabsi la xiriirta feyraska corona oo soo wajahday magaalada New York
Agabka aasaasiga ah ee caafimaadka ee magaaladaas ayaa la sheegayaa in ay gabaabsi yihiin.
TORONTO — Canada won’t have a team at the Tokyo Olympics unless the Games are postponed by a year — a bold move that would at least give Canadian athletes some sense of direction in the coming mon
The new coronavirus has woven itself into the daily lives of Somalis’ pocketbooks, hitting small[Read More…] The post Coronavirus hits Somalia’s khat sellers appeared first on Calanka.com.
Iiraan oo diiday kaalmo uu Mareykanka ugu yaboohay
Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan ayaa diiday dalab ay Mareykanka u soo bandhigeen oo ahaa in Iran la siiyo kaalmo dhaqaale si gacan looga siiyo dagaalka ka dhanka ah caabuqa coronavirus.
TRUMP: ” – Waxaan dagaal kula jirnaa cadow qarsoon”
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horreysay u adeegsaday cudurka faraha ba`an ku[Read More…] The post TRUMP: ” – Waxaan dagaal kula jirnaa cadow qarsoon” appeared first on Calanka.com.
Over the past few days, I have received a surge of people asking if they should buy stocks now, or at some specific point in the future. A few people have asked if they should sell everything and invest in a lifetime supply of toilet p
Sabrina Dhoorre oo uu ku dhacay cudurka Coronavirus
Sabrina Dhowre oo ah xaaska jilaaga Hollywood-ka Idris Elba ayaa xaqiijisay in uu ku dhacay[Read More…] The post Sabrina Dhoorre oo uu ku dhacay cudurka Coronavirus appeared first on Calanka.com.
Bomb blast targets police vehicle, two others wounded
Qaar kamid ah maxaabiista ayaa lagu soo oogi doona dacwad ah isku day dil iyo burburin hantiyadeed
Taliyihii ciidanka booliska degmada Afgooye oo qarax lagu dilay
Wararka ka imanaya degmada Afgooye ayaa sheegaya in qarax ka dhacay agagaarka deegaanka Lafoole lagu[Read More…] The post Taliyihii ciidanka booliska degmada Afgooye oo qarax lagu dilay appeared first on Calanka.com.